Fifaneraserana, lakilen'ny alika mahay mandanjalanja | Alika Manerantany
Fifaneraserana, lakilen'ny alika mahay mandanjalanja
Susy fontenla | | Training, Puppies
Indraindray isika dia mieritreritra fa miaraka amin'ny biby fiompintsika miara-monina amintsika dia efa nifanerasera izy, fa ny tsy fantatsika dia ny alika dia tsy maintsy zatra mifampiraharaha amin'ny alika hafa ary na dia amin'ireo biby hafa sy olona hafa amin'ny fianakaviany aza mba mianatra mianatra mitondra tena. Ilay -piaraha-monina, ary tokony hatao indrindra mandritra ny dingana puppy.
Ny fiaraha-miasa dia manampy azy ireo hianatra amin'ny alika hafa ny fomba fifampiresahana sy fanajana ny tenanao, ny fomba filalaovana ary manome fiarovana azy ireo bebe kokoa rehefa mihaona namana vaovao. Alika nifanerasera tsara ary lasa nahazatra ny karazan'olona rehetra, ny alika sy ny biby hafa dia tsy hanana olana ary hahafantatra ny fomba hamantarana ireo fambara izay hahatonga azy hisintona na ho mpinamana amin'ny namana tsara.
Fahadisoana lehibe ataon'ny tompona maro ny mampisaraka ny alika kely amin'ny alika hafa. Na dia tsy manana ny vaksiny rehetra aza ianao dia azonay entina mody any amin'ny namanao na fianakaviana nanao vaksiny ny alikany, satria milamina ny tontolo iainana. Amin'izany fomba izany no ahafahan'izy ireo mahalala alika hafa. Raha toa ka mitovy taona aminy izy ireo dia hianatra hilalao sy hitondrany ny mpiara-mianatra aminy toy izany, ary raha antitra izy ireo dia hianatra momba ny fihetsiky ny alika olon-dehibe, izay matetika koa mametaka ny fihetsik'izy ireo milalao rehefa mitarika hasiahana.
Etsy ankilany, tena ilaina ny alika mahay mifampiraharaha amin'ny olon-kafa, miaraka amin'ny ankizy, ny be taona sy ny olon-dehibe, ary mifanena amina olona nefa tsy matahotra. Puppy mahay mandanjalanja dia hisokatra hihaona amin'ny olona maro ary ho liana amin'ny fahalianana. Amin'io lafiny io dia tsy maintsy manabe ny ankizy hanatona azy ireo koa isika ary hampahafantatra ny tenany mba hahatsapan'izy ireo ny fifanajana.
Izany rehetra izany dia tsy maintsy atao ao amin'ny sehatra puppy. Amin'ny alika natsangana dia mety tsy nisy ny fotoana, ary hitombo ny asa raha toa ka nahazo fahazaran-dratsy izy ireo, fa ny zavatra tsara dia tena manan-tsaina ny alika ary mianatra haingana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Training » Fifaneraserana, lakilen'ny alika mahay mandanjalanja
Ahoana ny fomba hamolavolana ny alika
Ahoana ny fanalana ny kongona alika